Izibalo zokusetshenziswa zibonisa ukuthi i-WordPress iyisistimu yokuphathwa kokuqukethwe okuthandwa kakhulu (i-CMS) Amandla phezu kwe-26% yewebhu yonke, ngokusobala uyintandokazi phakathi kwezibhamu, abakhi bewebhu, nabamabhizinisi be-intanethi.
Nakuba kunezizathu ezanele zokukhetha i-WordPress ukubhala incwadi, sizogxila kwisakhi esisodwa esisenza i-CMS ekhethekile – inqwaba เจ้า – ปลั๊กอิน eyenza ukwakha isayithi kube lula futhi kumnandi.
ภาษาเยอรมัน Ama-plugin alayishiwe kakhulu futhi alinganisiwe kakhulu okufanele uwacabange lapho ukwakhiwa futhi ukubamba iwebhusayithith yakho ye-WordPress
1 I-1 JetPack
2 I-3 Ukuphepha kwe-WordFence
3 I-5 WooCommerce
4 I-7 I-WP Super Cache
5 I-9 I-CAPTCHA elula ngempela
6 I-11 I-Google Analytics yi-MonsterInsights
8 I-15 I-Clef Ukuqinisekisa สองปัจจัย
9 I-17 คูบาซ่าอมาซวานา
10 I-19 I-Meta Slider
11 I-21 Ama-ย่อรหัส Ultimate
13 I-25 I-WP-Yenza ngcono
14 I-27 I-TablePress
15 I-29 Imodi yokulondolozwa kwe-WP
I-WP-IkhasiNavi ikuvumela ukuba wenze ngezifiso izixhumanisi zakho zokuhlukanisa isayithi lakho le-WordPress Kodwa, kudinga ukuthi ubeke esikhundleni sezinkinobho ezimbalwa zekhodi ngokubukeka> Umhleli uma uhlela.
I-3 Ukuphepha kwe-WordFence
Ifomu lokuxhumana 7 iyi-plugin elula futhi eguquguqukayo evumela ukuthi udale amafomu okuxhumana okusheshayo ใช้ benzisa i-HTML Ungabeka lezi fomu kunoma iliphi ikhasi nge-shortcode.
Vakashela ku-intanethi: แผนผังเว็บไซต์ I-Google XML
I-Google XML Sitemaps i-plugin ebalulekile ye-SEO esisiza abakwa- ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลเว็บ ukuthi baqonde isayithi lakho bese babhala amakhasi awo.
I-7 I-WP Super Cache
SEO ของ I-Yoast ปลั๊กอินของอีเทอร์เน็ต ethandwayo engakusiza nge-on-page nokwenza kahle Kuyasiza ukuthola izinkinga, ukhiqize ama-sitemaps, futhi unikeze izincomo ezingathuthukisa izikhundla zesayithi lakho.
I-9 I-CAPTCHA elula ngempela
U-Akismet ungenye i-plugin engasiza ekuvimbeleni ugaxekile Ihlola ngokuzenzekelayo futhi ihlunga yonke imibono e-shady yokubuyekezwa komhlahlandlela.
I-11 I-Google Analytics yi-MonsterInsights
Ukuvuselela ama-Thumbnails kuyithuluzi elihle elingabuyekeza zonke izithonjana zokulayisha kwakho kwezindaba Lokhu kuyasiza uma usanda kushintsha izilungiselelo zesithonjana kusuka kuzilungiselelo> imidiya.
I-15 I-Clef Ukuqinisekisa สองปัจจัย
Njenge-Failafe, qiniseka ukuthi unezipele ezizokusiza ukuthi ululame ezinkingeni ezingalindelekile Nge-UpdraftPlus, ungakha kalula noma uhlele izipele ezizenzakalelayo zokuphepha okungeziwe.
Nge-Black Studio Widget TinyMCE, ungakwazi kalula ukufaka ocebile, okunamathiselwe kumidiya, nezinye izakhi zokuqukethwe kuma-sidebars.
I-19 I-Meta Slider
Amafomu we-Ninja ufaka umhleli wefomu lokudonsa uphonsa ekufakweni kwakho kwe-WordPress I-plugin yomsebenzisi มิตร engakwazi ukukuqondisa zonke izinyathelo zendlela.
I-21 Ama-ย่อรหัส Ultimate
Nge-Breadcrumb NavXT, unganikeza izivakashi zakho izixhumanisi zokuhamba ukuze zizisize ukuthi ziphi Uma ifakiwe, udinga ukunamathisela ikhodi elula ‘div’ lapho ufuna khona "umzila" เรา-breadcrumb ukuvela.
I-WP Mail SMTP ช่วยให้ฉันใช้งาน SMTP ฉันได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็น Okukhethwa kukho okuthuthukisiwe emsebenzini we-imeyili wesayithi lakho. Ukuze ใช้ i-plugin, iya kuzilungiselelo> I-imeyili kusuka kudeshibhodi yakho Ungathumela futhi i-imeyili yokuhlola ukuze uhlole uma ukucushwa kwakho kusebenza.
I-25 I-WP-Yenza ngcono
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอิน ikuvumela ukuthi udale futhi usebenzise amawijethi wesithombe kusayithi lakho Lezi amawijethi ngokuzenzekelayo zivumelanisa futhi zishintshe ngisho namadivayisi eselula Ungakwazi futhi ukwengeza isihloko, incazelo, kanye nesixhumanisi ukuze ubenze xaxa.
I-plugin Ye-Calendar ปฏิทิน ivumela ukuthi udale amakhasi asebenzisana nemicimbi efana nokukhushulwa, amaqembu, nama-conference Vele usebenzise isombombikubona esibonakalayo ukuze ugcwalise imininingwane bese ushicilela umcimbi wakho.
I-29 Imodi yokulondolozwa kwe-WP
Ngokuzenzakalelayo, i-WordPress inezindima eziyisihlanu zomsebenzisi – umqondisi, umhleli, umbhali, umnikelo, nombhalisi บทบาทผู้ใช้ของเรา ikuvumela ukuba ushintshe izimvume zohlu lomsebenzisi ngamunye Ukhululekile futhi ukudala izindima ezintsha ngezimvume eziyingqayizivele.
ปลั๊กอินของคุณ-WordPress, zikhona amathuba angapheli บน uhlobo lwamawebhusayithi ongawadala Qinisekisa ukuthi uhlela phambili ukuze izingxenye zesayithi lakho zifake isipiliyoni esisodwa, esihlangene Ungabhekisela kuwo lokhu okuthunyelwe kwamapulagi angaphezulu angasiza ukwandisa ukuguqulwa.